Ciidamada badda ee dowladda Puntland oo mashruuc waxbarsho ka hirgaliyay deegaanka Bendersiyaada ee duleedka Boosaso – Radio Daljir
Ciidamada badda ee dowladda Puntland oo mashruuc waxbarsho ka hirgaliyay deegaanka Bendersiyaada ee duleedka Boosaso
Bosaso,Feb 13 -Ciidamada badda ee Puntland ayaa mashruuc waxbarasho ka hirgaliyay deegaanka Bandarsiyaada oo masaafo 15 km dhinaca galbeed ka xigta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Munsaabad balaaran oo ay ka qaybgaleen wasiiro,wasiiro xigeeno,saraakiisha ciidamada badda Puntland iyo hogaamiye dhaqameed ayaa maanta lagu qabtay deegaanka Banadersiyaada,waxaana munaasabadda loogu wareejiyay dadka deegaanka dugsi waxbarasho oo ay ciidamada Puntland ka hirgaliyeen deegaanka Banadarsiyaada.
Wasiir kuxigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland Eng.Maxamed Ciise Lacle oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxaa uu sheegay ciidamada badda Puntland inay ka shaqeeyaan danta guud ee dadwaynaha.
Waxaa uu sidoo kale tilmaamay,ciidamada inay sanadkii lasoo dhaafay biyo dhaamin ka sameeyeen deeganada Puntland oo ay abaaraha ku dhufatay,waxaana sidoo kale intaasi raaciyay inay ka qaybqaateen dayactirka ceelasha,dugsiyada waxbarasho,iyo dayactirka matoorada.
Wasiirka ayaa ugu baaqay shacabka deegaanka Banadirsiyaada inay ciidamadu kala shaqeeyaan arimaha nabadgalyada,wasiirka ayaa sidoo kale u mahadceliyay dowladda imaaraatka Carabta oo maalgalisa ciidamada badda ee Puntland.
Caaqil Ciise Maxamed Ciise oo ka mid ah waxgaradka deegaanka Bandarsiyaada ayaa dhankiisa soo dhoweeyay mashruuca waxbarasho deegaanka ka fuliyeen ciidamada badda ee Puntland.
Taliyaha ciidamada badda Puntland Cabdirisaaq Diiriye Faarax ayaa isaguna sheegay mashruuca waxbarsho oo ay ka fuliyeen deegaanka Banadrsiyaada inuu yahay mid ay ugu talla galeen inay dadwaynaha deegaanka Bandarsiyaada ka caawiyeen arimaha banii’aadanimada.
Deegaanka Bendersiyaada oo ka mid ah degmooyinka hoosyimaada magaalada Boosaaso ayaa waxaa ku yaala xarunta ugu wayn oo ay ka howlgalaan ciidamada ilaalada xeebaha Puntland.